Home News Xubintii Labaad ee Golahii Wasiirada Laftagareen soo Magacaabay oo iscasilay!!
Xubintii Labaad ee Golahii Wasiirada Laftagareen soo Magacaabay oo iscasilay!!
Madaxweynaha Koofur galbeed ayaa usbuucaan magacaabay qeybtii labaad ee golihiisavwasiirada.
Shalay ayaa waxaa is casilay wasiir ku xigeen ka tirsan golaha wasiirata ee madaxweynuhu magacaabay, isla maanta waxaa iscasilay wasiir ka tirsan golaha wasiirada oo lagu magacaabo cali Aaden Macalin oo loo magacaabay wasiirka Deegaanka iyo Duurjoogta.
Cali Aaden ayaa u sababeeyey iscasilaadiisa inaysan u qalmin xilkaan beesha uu kasoo jeedo oo aan u qalmin xilkaas sida uu sheegay.
Shalay ayey ahayd markii wasiir ku xigeen uu sidoo kale isla sabataas isu casilay.
Madaxweyne Lafta Gareen oo aida uu xilka ku yimid muran badan ka dhlisay bulshada reer Koofu Galbeed ayaa u muuqda inuu qanci la’yahay beelaha qaarkood.